कन्फ्युजै–कन्फ्युजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
राजीनामा​ नदिने ओलीको अडानले गहिरिँदै राजनैतिक सङ्कट
मर्मत गर्नुपर्ने जहाजबाट डेढ महिनामा ६० उडान
अबको पाँच वर्षभित्र विकासशील देशमा नेपालको स्तरोन्नति हुँदै
कुखुराको दानामा मूल्यवृद्धिको तयारी
श्रीलंकाको जेलमा छन् २६ नेपाली महिला
शानदार जितसहित पिएसजी दोस्रो स्थानमा
नौ करोड सङ्क्रमित निको भए, दुई करोडभन्दा बढीको उपचार हुँदै
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिकन्फ्युजै–कन्फ्युजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
कन्टिर–बाबू कहिलेकाहीँ निकै अलमलिन्छन् । के बोल्ने के नबोल्ने, के लेख्ने नलेख्ने, कस्ता विचार व्यक्त गर्ने कस्ता नगर्ने भन्नेमा उनी बेला–बेलामा कनफुजियाउँछन् ।
एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ र सबलाई थाहा पनि छ कि कन्टिर–बाबू सूचना, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कट्टर पक्षपाती हुन् । उनी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसो त जेमा पनि प्यार–प्यार बोल्ने कन्टिर–बाबूको बानी छैन । नबोली नहुने परिस्थिति देखेमात्र उनी बोल्छन् । जे बोल्दा लोक–हित हुन्छजस्तो लाग्छ, कन्टिर–बाबू त्यो बोल्छन् नै चाहे परिणाम जेसुकै होस्, उनी आफ्नो विचार व्यक्त गर्छन् नै ।
बोल्दा के कुराले रापको ताप घट्छ, के बोल्दा ओल्बाको मान झर्छ, कस्तो चाहिँ धारणाले चोसजको अपहेलना हुन्छ भन्ने कन्टिर–बाबूलाई मतलब छैन । यसकारण पनि उनी आफूलाई लागेको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत स्पष्ट भाषामा बोलिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय अदालतका सन्दर्भमा, अदालतमा विचारधीन मुद्दाका बारेमा के बोल्ने के नबोल्ने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । र यस्तो बहसको अन्तर्यमा कतै संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रभावित पार्न चाहने तत्त्वले खेल्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशङ्का कन्टिर–बाबूको मनमा उत्पन्न भएको छ ।
अरे यार, हिजो यही बोल्न पाइएन भनेरै जनताले तत्कालीन शासकविरुद्ध आन्दोलन गरेको हो । त्यही क्रममा भएको त्यत्रो सहादत बिर्सेर आज फेरि जनताको अभिव्यक्तिमाथि किन अङ्कुश लगाउन खोजिँदै छ ? कन्टिर–बाबू यसको भित्री रहस्य भने बुझ्न खोज्दै छन् ।
त्यसो त अदालतको मानहानी हुनेगरी बोल्नुहुन्न भन्ने कन्टिर–बाबूलाई राम्रो थाहा छ, कसैले सिकाइरहनु पर्दैन । अदालतको मानहानी भन्नाले विधिको शासन मान्दिनँ, अदालत–सदालत मान्दिनँ भन्ने हो, मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया, सेरोफेरोका न्यायाधीशको नियतमाथि शङ्का, न्यायपालिकासहित राज्यका निकाय सेटिङमा चलिरहेका छन् भन्ने आशङ्का गर्नै पाइँदैन भन्ने होइन । त्यसैले कन्टिर–बाबू भन्छन्– ‘विचाराधीन मुद्दाका बारेमा बोल्न पाइँदैन’ भन्ने डन्डा तेर्स्याएर पक्ष–विपक्षमा आउने विचार निषेध गर्न, जनता तर्साउन पाइँदैन ।
यसबाहेक अदालतका बारेमा बोल्नै पाइँदैन भनी डर देखाउँदैमा कन्टिर–बाबू तर्सिने, कान, आँखा, मुख थुनेर बस्नेवाला छैनन् । बाँकी आफैँ मिलाएर विचार होस् श्रीमान्, श्रीमती, सुश्रीहरू !
अभिव्यक्ति विचाराधीन स्वतन्त्रता
जहाँ छ त्यहीँ ठिक, कमनिस्टको वर्गशत्रु
एकै झट्कामा चैट ! सेटिङ राज्यको सपना